Mhedzisiro yekuramba kusahadzika kweNzira Yako uye Descartes - Rabbi Michael Avraham
Mhedzisiro yekuramba kusahadzika kune yako nzira uye Descartes
Responsa > Category: General > Mhedzisiro yekuramba kusahadzika kune yako nzira uye Descartes
Rational Yakabvunzwa makore matatu apfuura
Ini ndaida kubvunza nezve chimwe chinhu chandakasangana nacho paRepentants webhusaiti,
Pane mubvunzo waKant unonyatsozivikanwa wekuti hapana kuwirirana pakati pekuzviisa pasi uye nyika pane se uye inoratidzika seyo nyore, zvino mubvunzo unomuka wekuti tingavimba sei nekufungidzira kwedu kuti kune hukama pakati penyika nemunhu. Mushure mezvose, hazvigoneki kupa humbowo hwakadaro nekuti isu tagara tichisangana nekudzoreredzwa kwemibvunzo, asi zvinoita sekunge avo vasina kukahadzika vanobvuma fungidziro yekuti fungidziro dzekutanga hadzifanirwe kuunza humbowo uye kunyanya kuti iyi ndiyo tsanangudzo yavo se axiom.
Saka ndaida kubvunza, iko fungidziro yakatsaukana yekuti chero chinhu chisina chikonzero chine mubvunzo, icho pachacho fungidziro?
Kana zvakadaro, zvino zvinoita sekunge isu tine rudzi rwechisungo chekufunga chokwadi pamusoro pefungidziro dzedu dzekutanga, asi sekuzivikanwa kwarabhi haagamuchiri izvi, asi kutsiva chokwadi nekunzwisisa, asi ndiyo nzira yazvinopindirana nayo munyaya? Iko mukana chaiwo wekugona unofunga kuti unobvuma chirevo chekupokana kwete?
Zvakare, ndakangouya nemubvunzo pamusoro paDescartes uyo maererano naye haana kuita sekunge awana zvese, asi nekuda kwehumbowo hweontological uye kuti Mwari akanaka pakuedza kugadzirisa nyaya, asi akafunga sei kuti zvakanaka. chinangwa?
Handina chokwadi kuti ndanzwisisa mubvunzo. Zvakadaro, ini ndichataura zvishoma pane zvawataura:
Kant haatauri kuti hapana hukama pakati pemaonero edu nenyika. Iko kune chokwadi chekubatanidza, uye zvimwe sei. Anongotaura kuti mufananidzo watinoona chinhu chinoziva. Asi anomiririra chiitiko chiri munyika pachayo. Semuenzaniso, electromagnetic wave munyika inoshandura kuva chiedza mukuziva kwedu. Hapana kubatana pakati pavo? Zviri pachena kuti pane kubatana. Chiedza chiratidzo chinomiririra che electromagnetic wave.
Pane mubvunzo wakamutswa wakananga kuKant, kubva kwaanotoziva kuti kune nyika pachayo kana zvese zvinosvikika kwatiri ingori chiitiko (iyo cognitive phenomena). Ndinofunga kuti iyi mhedzisiro yenheyo yekukonzeresa, inova musimboti wekutanga. Kubva pamusimboti uyu zvinotevera kuti kana paine chiitiko chinoziva panofanira kunge paine chimwe chinhu munyika chinochikonzera.
Handina kunzwisisa mubvunzo pamusoro pechinhu chisina chikonzero. Iwe unoda kubvunza kana pane zvinhu pasina chikonzero here? In musimboti zvinogoneka hongu, asi musimboti causality anofungidzira kwete. Mu quantum theory, semuenzaniso, hukama pakati pechikonzero nemhedzisiro yakasiyana uye haitombovepo chaizvo mupfungwa yakajairwa.
Unosanganisa chokwadi nechokwadi. Kuti ndinofunga kuti hapana chine chokwadi hachinei nenhaurirano neimwe nzira.
Kusava nechokwadi kunopesana nekunzwisisa. Muponesi anofunga kuti chokwadi chete chinopa chokwadi, sekubuda kwazvinoita kubva pane zvaunotaura. Asi wakarasika pamusoro pazvo.
Rational Akapindura makore 2 apfuura
Ndatenda zvikuru nemacomments mamwe acho ndakanzwisisa ndichaedza kujekesa zvikamu zvandisina kunzwisisa.
2. Ndakabvunzawo nezvenyaya iyi. Chero ani zvake asina chokwadi anoita seanobvumirana kuti panofanira kuva nekubatana pakati penyika uye chiitiko (taura maziso uye chiedza muDoge 1), asi kana kuziva kwedu kwose kwakavakirwa chete pamusimboti wekutanga se causality inogona kunge ichiripo. yakadudzirwa nokuda kwezvikonzero zvisingaverengeki kuti zvinoonekwa kubva kumanzwiro zvakagadzirwa sei, kunyange Descartes Icho chikonzero pasi peiyi pfungwa yakafara; Asi vazhinji vedu hatifungi kuti ndicho chikonzero chakanaka. Kana zvakadaro, musimboti wekukonzeresa wega hauite sewakakwana, asi unoda chimwe chinhu, kunyangwe hazvo zvichiita kunge chiri kumashure.
3. Handina kureva mubvunzo pamusoro pezviitiko kana kushanda, kunyange zvazvo zvechokwadi kune hukama, asi kunyanya pamusoro pekufungidzira uye zvirevo, semuenzaniso tsanangudzo yekufungidzira ndeyokuti haina chikonzero. Ini ndinofunga neizvi chete chinhu chinogona kutendwa, mumhando yemafungiro ekuti Mwari ndiye anchor yezvikonzero munyika. Asi kana isu tisina kupokana fungidziro tingataura sei kuti chimwe chinhu hachina chokwadi asiwo chine chidimbu chekunzwisisa? Mushure mezvose, chero fungidziro ine chekuita nekunzwisisa inotora kumashure kuti inogona kubvunzwa.
3. Uyewo kune rumwe rutivi, munhu asina chokwadi nenzira yake zvechokwadi anoda kusava nechokwadi nemafungiro, asi kana zvakadaro, anogonawo kusava nechokwadi nekufungidzira kuti kufungidzira kunofanira kubvunzwa kana kuti chero chinhu pasina chikonzero chakaipa. Kana zvakadaro, anoita seari kutema bazi rake here? Aihwa?
5/4 ndaireva se3 Risha.
3. Unoshandisa izwi rekuti “chikonzero” nenzira yandisinganzwisise. Unoreva kuravira / kufunga?
Zvechokwadi hapana chikonzero chechikonzero. Asi hachisi chokwadi kuti handipokane fungidziro. Hapana kudai, fungidziro kana mhedziso, ine chokwadi kwandiri.
Rationalist Akapindura makore 2 apfuura
Chokwadi ndinoreva kudivi rechikonzero / kuravira.
Kutanga, maererano ne2 unobvuma here kuti isu tinongove nechikonzero chekuti zvatinoona ndezvechokwadi? Nokuti zvinoita sokuti hazvina kukwana kuti chero musimboti priori kuva kuti anogona * ega * zambuko akananga kugashirwa zvinhu zvenyika.
Saka kana zvakadaro, unokwanisa sei kuwana nzvimbo asi nenzira isina chokwadi? Izvi ndizvo zvandisina kunyatsojeka kwandiri.
Uye kunyange kana iwe uchiti zvinogoneka, maererano nezvazvinenge zvisina chokwadi? Nekuremekedza kumwe kukwidza kana kumwe kusahadzika? Zvinogoneka kuti kusahadzika kumwe chete kunozofungawo kuti kune imwezve, imwe tsananguro huru, uye kuti iye, kana kuti kutanga kwezvose, hurongwa hwetsananguro hunonzi axiomatic. Asi zvino zvinongoreva kuti fungidziro yataifunga kuti yaive nhanho haina kudaro, asi mhedziso kubva kune chimwe chinhu chakakosha.
Kunze kwekunge iwe usina chokwadi uye uchiti fungidziro inogona kubvunzwa, asi ipapo mukana wacho unokodzera papi pamufananidzo? Nekuti zvese kwaari zvakaenzana zvakaenzana. (Uye fungidziro yekuti zvese zvinopokana ndezvekupokana…)
Uye kana zvirizvo, sekusvika kwaunowana zvirevo zvekupokana saka zvakare hapana chokwadi kune chokwadi chekuti chimwe chinhu chinoita senge chine musoro kwandiri, nekuti mukana wese uri padanho rekunzwisisa asi hapana hukama pakati payo nenyika ine chinangwa uye. haigoni kuvharwa senhanganyaya.
Uye kana usiri kukahadzika, saka hausi kubvunza fungidziro zvakadaro…
Mutongi wekupedzisira Akapindura makore 2 apfuura
"An electromagnetic wave munyika inoshandura kuva chiedza"
Iyo wave inoshandura kuita neuronal zviratidzo. Kuturikira mune chimwe chinhu Kuturikira mune chimwe chinhu… Neimwe nzira pakupedzisira pane chiedza.
Hapana kubatana kwakananga pakati pechiedza nemasaisai. Mamiriro acho ezvinhu haana kunanga zvakanyanya.
Ndakakurasa zvachose. Unosanganisa bonde nevasina bonde kasingaperi, uye usataure zvandapindura. Ndakatopindura zvese.
Arbitrator, inobatanidza zvakananga. Imwe inokonzeresa imwe, kunyangwe ikaitwa kuburikidza nekuyananisa matanho akati wandei. Paunobvisa nzira pakati pekukwesha mechi nekubatidza moto unowana ipapo mamwe matanho epakati. Saka manje? Imwe inokonzera imwe. May Nafam kana paine intermediary stages? Uye kuti tiri kubata nenyaya yesimba resimba rake?
Inopindura kurasikirwa Akapindura makore 2 apfuura
Kana wakandirasa wapindura sei?...
Izvo zvisina kujeka kwandiri ndezvekuti zvinowanzobvumirana kuti tsananguro yenzvimbo ndeyekuti hapana chikonzero chekuimisa.
Asi kana zvakadaro, chirevo chinogona sei kubvunzwa pasina kushandiswa kwechimwe chimiro? Sezvawati unoita.
Saka kune rumwe rutivi unowana kuti fungidziro inogona kubvunzwa saka ungafunga sei kuti chimwe chinhu chakawedzera kana kushomeka? Mushure mezvose, iwe unogona zvakare kukanda kumwe kusahadzika pane iyo pfungwa yekugona ...? Uye saka mhedzisiro yako yaive ine musoro kuve sulfist. Kana kuti iwe unokahadzika fungidziro yekuti unogona kupokana uye iwe uchanamira.
Asi zvinofanirwa kutaurwa kuti pane pakutanga kwekufunga kumwe fungidziro * yakati * ichave diki sezvairi.
Semuenzaniso fungidziro yekuti zvatinofunga zvine musoro ichokwadi chinangwa (kunyangwe zvisiri izvo hazvisi izvo chinangwa). Nekuti chete kubva ipapo zvichienda mberi zvinogona kutaurwa kuti vashandi vanogona, nezvimwe. Asi kana ukataura kuti fungidziro dzedu dzese hadzimbove nechikamu chakati chekupokana chirimo mazviri, saka kupokana ikoko kunofanirwa kuumbwa zvichitevera zvichemo zvekupokana zviri kunze kwazviri, uye sekunge uri mupokani haungamboti chimwe chinhu chiripo. zvinonzwisisika sezvazviri ...
Saka ndinoda kutaura kuti iwe unobvumawo kuti pane chinhu chekare nezve nzira yako uye kwete zvese zvinongove zvinogoneka. Kana kuti mukana wacho ndewechokwadi.
Zvakadaro, kana ndataura chokwadi, zvino chakanakira kuona ndechekuti ungada kuve postmodernist pane kuva fundamentalist 😉
Uye kunyangwe pasina humbowo hwekutaura nezvahwo, Akapindura makore 2 apfuura
Uye kunyange pasina humbowo hwekutaura nezvahwo, pane kashoma kekutaura munhanganyaya yemabhuku ekutenda:
"Sekuziva kwangu, munhu haana mukana wekusvika pachokwadi mune chero chikamu." Kana akawana nzira yekuwana chokwadi chakadaro angangodaro akarasika (zvechokwadi! 🙂) ”
Izvi zvinoreva kuti pane chimwe chinhu chine chokwadi uye chakakosha pazasi pekufunga kwedu pakupera kwezuva chinoti pane kuwirirana pakati pekunzwisisa uye imwe nyika inofanira kutongerwa kusahadzika.
Pindura, ndakurasa manje (urikuda chii manje) sezvo ndakambopindura zvese.
zvigaro? Akapindura makore 2 apfuura
Nzira yako zvakare inofanirwa kuve neimwe (kunyangwe yakaganhurirwa) nzvimbo, iyo yatinozogamuchira nechokwadi uye kwete nekuda kwekunzwisisa.
Uye ini ndinofunga chirevo ichi ndechekuti izvo zvinoita sezvine musoro kwatiri zvine musoro uye pane hukama kune izvozvo. Nenzira iyi chete ndinofunga kuti zvinokwanisika kururamisa mibvunzo yangu pasina kuwira mukusava nechokwadi kwakakwana uye kune rumwe rutivi kuti ndirege kutaura kuti zvinhu zvose ndezvechokwadi.
Nekune rimwe divi, wakatanga kutaura kuti zvechokwadi wakaita “kusava nechokwadi nefungidziro huru. Hapana kudai, fungidziro kana mhedziso ndeyechokwadi kwandiri. "
Asi kana uchinyatso reva zvawakanyora, unofanirwa kuve nekugona kuona kuti ndechipi chirevo chiri chokwadi kana kuti kwete (nekuti hausi munhu anokahadzika….), Asi kugona uku imhando yefungidziro uye unopokana uye wodzokorora uye ipapo unofanira kuva usina chokwadi.
Ndinofunga kuti zvinhu izvi zviri nyore, asi sezvo ini ndichiona kuti watova muzivi wechipiri kutaura zvinhu zvakafanana kana imi mose muchizvizivisa kuti muri vasiri postmodernists ndaida kuona kuti zvechokwadi ndanga ndiri chokwadi here kana kuti mazwi angu akange asina kupinza. Uye iwe unogona kudya keke uye zvakare kuisiya yakazara.
Nekuti anobvumawo kuti hapana kubatana pakati pefungidziro uye kuda kwavo munyika maererano naKant uye munhu wese anofanira kubvunza, uye zvakadaro pane dzimwe nyaya pane mhedziso dzine musoro… Ndaratidza pano.
Ndinopindura kechitatu: kwete. Hapana chokwadi pameso angu. Uye ndinodzokorora kwegumi nenomwe kusava nechokwadi hakusi kukahadzika. Kupokana kunoreva kuti imwe nzvimbo haina nani pane zvakapesana. Kusava nechokwadi, kune rumwe rutivi, kunongoreva chete kuti handina chokwadi.
musikana Akapindura makore 2 apfuura
Uye zvakadini nekoramu yejometri inosvika ku0. Chimwe chinhu chairatidzika kuva chine musoro kwandiri. Zvinonzwisisika mumaziso angu kuti izvo zvinoita sezvine musoro kwandiri - zvine musoro. Zvine musoro mukuona kwangu kuti zvandinoona sezvine musoro zvine musoro. Isu tichadzikisa mukana kusvika ku99.99% chokwadi uye yega yega inokwidibira kusvika pamuganho we0% chokwadi.
Ndakanyora zvandainzwisisa kubva pamubvunzo. Nekuti kana mhinduro iri yekuti "chimwe chinhu chinoita sechinonzwisisika kwandiri" patichaisa pa99.99, saka 99.99 mushure meakaundi ese ari munyika, uye ichi chirevo chakananga pasirese uye kwete chirevo pachangu - saka isu sarudza hukama hwakaoma pakati pekunzwisisa uye chokwadi nechokwadi.
Hazvinyatsonzwisiswi Akapindura makore 2 apfuura
Chishamiso chacho chinogadzirwa sei kuti hapana chokwadi asi chisingatungamiri mukupokana?
Nekuti iyo pfungwa yese yekusavimbika uye kugara zvine musoro inofunga kuti pane yechipiri sarudzo, asi iwe hauna kugona kuongorora izvo zvine musoro nekuti iyo pachayo imwe fungidziro yekuti iwe unozobvunzawo kana zvine musoro ...
Ichi chishamiso chinoshamisa chiri mumusiyano pakati pe90% blush uye 50% kusahadzika (kana isu tikasimbirira pa quantifying). Kunyange zvazvo izvi zvichinyatsoshamisa uye zvisinganzwisisiki, zvinogona kuitika. Ndinokungurusa cube kanosvika mamiriyoni matanhatu. Ini ndinobheja mhedzisiro yacho ichagovaniswa zvakaenzana uye pachave nemhedzisiro inosvika miriyoni pawigi. Ndine kusahadzika (haisi 100%) asi zvakadaro izvi ndizvo zvichaitika. Stunning.
Uye ini ndine kugona kuongorora intuitively kukosha kweiyo intuition zvakare. Iyi circularity ndeye gibberish chete. Zvakafanana nokubvunza kuti unoziva sei kuti wakarurama, iwe ndiwe unosarudza kuti wakarurama. Izvi zvakasiyana sei nenharo yenguva dzose yekupokana?
Takatopedza zvibodzwa izvi zvekusvika pakudeuka ropa.
Chii chinobatana pakati peizvi uye nharo yakajairwa yekupokana. Pano munhu haabvunzi kuti “unoziva sei” asi anobvuma zvese zvinotaurwa nemunhu uye anongotaura nezvemaitiro ake chete. Kana akati ane zana muzana rechokwadi chokuti chimwe chinhu chakarurama, uyewo ane chokwadi zana muzana kuti kana aine chokwadi chezana muzana kuti chimwe chinhu chakarurama ipapo zana muzana kuti chimwe chinhu chakarurama - ipapo zvinhu zvose zvakanaka nokuti mumwe ane chipi nechipi acharamba ari mumwe. Asi kana iine mukana chete, saka denderedzwa rekudzokorora riri kudzima kusvika zero. Very simple. Chero zvazvingava, zvinoita sezvingangoita kwandiri kuti hapana mumwe pano pane saiti kunze kwako iwe unoziva kupindura izvi. Uye kunyangwe uine mhinduro yakangwara haugone kuiwana pano mushinda. Sezviri pachena iyo SAG yaive nemhosva uye yakachinja pakati pemhinduro nemhinduro.
Hope ndakaona kuti ndanzwisisa kare Akapindura makore 2 apfuura
zvirokwazvo. Ini ndinobvuma kuti zviri nyore zvekuti pakupedzisira kugona kuongorora intuition pachayo chirevo chaunofanira kugamuchira mu * chokwadi *, kunyangwe mukati meiyo intuition inosanganisirwa mukana wekuti haina chokwadi, asi haibvi mupi wekunze, asi * yemukati * kusahadzika Chikamu chetsanangudzo yechinhu ichi, chinhu chikuru chekuti pane chimwe chinhu pano chokwadi.
Pfungwa iyi yakakosha nekuti ndaida kuve nechokwadi chekuti zvinhu izvi zvaiita sezviri nyore kwandiri zvaive zvechokwadi. Nokuti sezvandambotaura pakutanga pane mumwe munhu anokosha uyo ariwo muzivi akadaro anoramba zvachose pfungwa iyi asi achisimbisa kune rumwe rutivi kuti haapokane pane zvinonzwika zvisingabviri zvachose.
Uye saka mukati mekukurukurirana pano zvingaita sekuti iwewo unoenda kune nzira yake, saka handina kukwanisa kuona kuti chishamiso ichi chinogona kubudiswa sei uye kunyanya mukunzwisisa kwangu kwekare kwauri kuti uku kusahadzika kwekunze kune chirevo ipapo mubvunzo unomuka. kuti nei ichingova 10% kusahadzika uye kwete 50% kusahadzika kwemaitiro. Asi ndirikuona uchibvumirana nenzira yangu yandaratidza pano.
Zvechokwadi, zvinogoneka kuti Shabbat yakaronga tsananguro inotsanangura muzivi mumwe chete achishandisa kubatanidzwa kwezvisingagumi zvetsanangudzo kuti kunyange zvazvo tsananguro yose inoda tsananguro ichiri kutakura huremu hushoma, kwandiri pachangu inonzwika inokatyamadza zvachose kana zvichibvira zvachose. Asi ndiyo chete nzira yandakawana nayo.
Uyu mubvunzo wakakoshawo pakupokana kwako kune zvichemo zvevafundamentalist kune rimwe divi uye mukana wekusava nechokwadi kune rimwe divi. Asi iwe unogona kuti imhando yetatology. Kunyangwe ini ndichifunga kuti inorodza mutsauko pakati pemupi wekunze (PM) uye wemukati mutengesi (yako yekugadzira nzira).
Kwete, hazvisi zvechokwadi. Izviwo hazvina chokwadi.
zvinogumbura Akapindura makore 2 apfuura
Unobvuma here musiyano uri pakati pekutaura kwako kuti fungidziro dzehwaro pachadzo dziri mufungidziro isina chokwadi, uye kupokana kuri kunze kwefungidziro huru pachayo? (Zvino kana iwe ukawana imwe yekudzora sisitimu sechinhu, kana iwe unotongerwa seanokahadzika).
Zvikasadaro ini handisi kunyatsonzwisisa kuti hausi kukahadzika sei kana iwe uchikahadzika fungidziro kunyangwe muzvikamu zvega (chero bedzi isiri chikamu chefungidziro imwechete isina chokwadi).
Zvinoita sekuti pane mutsauko pano wandisinganzwisise nekuti kana zvisiri senge ndati handisi kunyatsonzwisisa kuti unozviti sei haupokane. Zvimwe unogona kutsanangura pfungwa diki iyi.
Handisi kunyatsonzwisisa kuti dambudziko riri papi apa. Ndinotaura zvinhu zviri nyore uye zvakajeka. Mafungiro angu haana chokwadi mumaziso angu. Kwete nekuti pane quirks pamusoro pavo asi nekuti ini handina chokwadi kana iwo ari echokwadi (kune dzimwe nzira dzinogona kuitika). Hamuzivi kuti kusahadzika kwekunze chii. Ndine kusava nechokwadi mumafungiro angu. ndizvo.
zvino ndazviwana here? Akapindura makore 2 apfuura
Kupokana kwekunze Chinangwa ndechekuti kupokana kunobva panzvimbo isina kunaka serudzi rwekuvhiringika kwekunze kwekufunga asi kusiri kwekuzvarwa sechikamu chechimiro chekufunga icho semuenzaniso chinoti chakarurama mu90% chete yezviitiko.
Asi pawakangonyora: "Mafungiro angu haana chokwadi mumaziso angu". Nekuti handina chokwadi kana iwo ari echokwadi (kune dzimwe nzira dzinobvira). Saka zvinonzwika senge mupi asina kunaka zvachose uye kana zvirizvo unogona kuramba uchizvikanda kumashure zvakare:
Nekuti zvinoreva kuti kune "iwe unoona" uye sekunze kwavari unotarisa fungidziro. Semuenzaniso unogona kunzwisisa izvi mumufananidzo wako pamusoro pemeso epfungwa kuti anotarisa pfungwa dziri kure.
Asi kana zvakadaro, munofanira kubvuma kuti ndimi munotsaura (= maziso?) Ivo pachavo vane chokwadi chakakwana pamusoro pekugona kwavo kuona fungidziro dzehwaro zvekuti kunyangwe ukasawana mwero wavo wekururama wakakwana unotofanira bvuma nechokwadi kuti vane mwero wakati wekururama.Uye mamwe maparameter akaita sechinhambwe chepfungwa, zvishuwo nezvimwe. Saka wakananga padanho rimwe chete haupokane zvachose kuti kunyangwe kusarongeka kuri mavari ndiko kuri muchimiro ichi.
Asi kana ukakanda kupokana kwakashata pavari zvakare:
1. Ipapo hauzombokwanisi kubuda kubva mukutenderera kwekukahadzika. 2. Hapana chikonzero chekufungidzira kuti nhamba yehuwandu hwekugovera ndeye 10% chete fungidzira uye kwete 50%. Uye uku kwatove kukahadzika kuzere 3. Zvinozotungamira kune kukahadzika kwekusatenda kuti iwe unozopedzisira wabvuma kuti iko kurongeka kwechokwadi chako chakanangana nekuita zero mukuwanda kwezvingangoitika. 4. Unogonawo kubvunza nheyo yekukanda kusava nechokwadi kwakashata.
J On VaRehavha isangano rerusaruraganda here? (chikamu 484)
Nhasi maonero aya ari munharaunda yeruzhinji On Nekufa kwemushakabvu Prof. David Halvani Weiss (column 485)